Rakitsary - Lalamasaka Hatry ny Ela
par Administrator · Published 9 juillet 2020 · Last modified 2 février 2021
par Administrator · Published 12 avril 2020
Asandratray amin’ny Avo, Musics and Voice Orchestra -en
par Administrator · Published 5 avril 2020 · Last modified 11 juillet 2020
Eto ianao, Musics and Voice Orchestra & dep Famoronankira Jesosy Mamonjy
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 4 avril 2020
Ireo Fiangonana maritiora. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe nampanaovin’Andriamanitra azy teto amin’ny firenenay. Manasa anao izahay hijery ny horonantsary 4 mitohy.
Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy part 2 of 4
Fitoriana Filazantsara eny amin’ny tany malalaka famonoan’omby, Fenoarivo Madagasikara. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe nampanaovin’Andriamanitra azy teto amin’ny firenenay. Manasa anao...
Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 1961 part 3 of 4
Ramatoa Jane Collins Daoud mitory teny eny amin’ny tany malalaka famonoan’omby, Fenoarivo Madagascar. Ireo Fiangonana maritiora. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy hanohizana ireo asa lehibe...
Ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy 1961 part 4 of 4
Fijoroana Vavolombelona fahagagana maro : « Ny moana miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka, ary ny jamba mahiratra. » Fenoarivo Madagasikara. Ity horonantsary ity dia noraiketina sy novokarin’ireo Misionera MA Daoud mivady tamin’ny 1961. Ny fotoana nandraiketana azy ity no fotoana nanamarika ny niandohan’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy izay naorin’izy ireo. Natolotray ho azy mivady ny Siteweb : https://lalamasaka.mg ho fahatsiarovana sy...
par ANDRIATSALAMA Hermys · Published 27 mars 2020 · Last modified 28 mars 2020
Jesosy Mamonjy Ankorondrano en 3d
Emission Toriteny am-polipitra
Tu es mon asile et mon bouclier; J'espère en ta promesse. — Psaumes 119:114
Total visitors : 7,918
Total page view: 12,916
Fandraisana mpianatra vaovao eto amin’ny Musics and Voice Orchestra, janv 2021